Chaayinaa 'Koronaavaayiras': Chaayinaan namoonni 139 vaayirasii haaraadhaan qabamuu mirkaneessite - BBC News Afaan Oromoo
Chaayinaa 'Koronaavaayiras': Chaayinaan namoonni 139 vaayirasii haaraadhaan qabamuu mirkaneessite
20 Amajjii 2020
Goodayyaa suuraa Magaalaa Wuuhaan keessatti namoonni hedduun qabamaniiru
Vaayirasiin sirna hargansuu namaa hubu kan maqaa 'koronaavaayiras' jedhamuun beekamu Chaayinaa keessatti yeroo jalqabaaf mul'atee guyyaa lammaffaasaatti namoota 139 qabuu aanga'oonni biyyattii beeksisan.
Magaalota gurguddoo biyyattii Wuhaan, Beejiingi fi Sheenzen magaalota vaayirasiin kun akkaan keessatti tatamsa'aa jiruudha.
Yeroo ammaa lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii 200 caaleera, namoonni sadi ammoo dhibee kanaan du'aniiru.
Akka Dhaabbati Fayyaa Addunyaa jedhutti akkuma sakatta'iinsii fi qorannoon yaalii fayyaa gaggeeffamaa deemuun lakkoofsi namoota qabamanii dabalaa deemaa jira.
Vaayirasiin hin beekamne namoota hedduutti daddarbaa jira
Vaayirasiin kun jalqaba ji'a Muddee keessa magaalaa Wuhaan keessatti mul'ate. Ergasii Taayilandi keessatti namoonni lama, Jappaan keessatti ammoo namni tokko qabaman.
Ogeessi fayyaa UK tokko BBCtti akka himetti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii kan Chaayinaan ibsiteen ol ta'a.
Dhibeen kun bineensota irraa kan namatti daddarbu ta'uu kan ibse Dhaabbati Fayyaa Addunyaa darbee darbees namarraa namatti ni daddarba jedheera.
Hariiroo cimaa bineensota waliin uumuu dhiisuu, soorata akka foon fi killee qopheessuu irraa of qusachuu fi nama qufaan qabamerraa fagaachuudhaan balaa dhibee kanaa salphisuun ni dand'ama jedha dhaabbati kun.
Komishiniin Fayyaa Biyyaalessaa Chaayinaa dhibeen kun kan yaalamuu fi ittifamu ta'uu mallattoon agarsiisu jiraachuu fi garuummoo madda vaayiresichaa, tatamsa'inaa fi akkaataa to'annoo isaa irratti beekumsa ga'aa dhabuun rakkoo akka uume ibseera.
Vaayirasiin kun maali?
Akkaataa qorannoo samudaa namoota dhibee kanaan qabaman irraa hubachuun danda'ametti maqaan vaayirasii kanaa 'Koronavaayiras' jedhamee akka waamamu Dhaabbati Fayyaa Addunyaa ibseera.
Vaayirasiin sirna hargansuu namaa hubu kun gosa hedduu kan qabu yoo ta'u ja'an isaanii(kan haaraa mul'ate kana waliin torba) daran nama hubuudhaan kan beekamaaniidha.
Gosa vaayirasii isa haaraa argame kana malee kan durumaan Chaayinaa keessa ture bara 2002 irraa eegalee namoota 774 ajjeeseera, namoonni qabaman 8,098 turan.
Dhaabbata Fayyaa Adduunyaa
'Anti-body' yookan farra qaama alagaa haaraan Vaayirasii HIV %99 ajjeesa
23 Caamsa 2018
Adunyaa irraa kan jalqabaa kan tahe baankiin ispeermii namoota HIV'n qabamanii kuusu baname.
28 Sadaasa 2019
Iboolaa akka haaraatti DR Koongootti mul'ate sodaa umee jedhame
13 Waxabajjii 2019
8 Muddee 2019